Abacre Point Tafaariiqda of Sale (POS) - Main Page
Abacre Point Tafaariiqda of Sale
Abacre Tafaariiqda Point of Sale (POS)
Gaaraan buuxda gacanta la this jiilka xiga software maamulka tafaariiqda!
Download maxkamad version 30-maalin buuxda-ciyaaray ( 6,94 MB)
Top 10 sababo in la iibsado Abacre Point Tafaariiqda of Sale
View abaalmarino dhan.
Abacre Point Tafaariiqda ee Sales waa jiil cusub oo software tafaariiqda maamulka ee Windows. Waxaa xal buuxa oo tafaariiqda ah: qaadashada amarada, biil, wax iibsiga, alaabada iyo maamulka shaqada. Interface user ayaa waxaa si taxadar leh filaayo in aqbasho xawaaraha sare ee si macmiilka ah iyo ka hortagga qaladaad caadi ah. Waxaa loogu talagalay isticmaalaya on kombiyuutarada badan, oo ka kooban heer lagu kalsoonaan karo oo ammaan oggolaansho.
Wixii maamulayaasha, waxaa jira set qani ku ah warar sheegaya in ay muujinaysaa sawir buuxa ka ah hawlaha tafaariiqda: iibka by muddo la siiyo, saacadood ee Xamuulka sare, Z-Out, on Tirin gacanta, shaqaalaha ugu firfircoon, hababka lacag bixinta, iyo xisaabinta canshuurta automatic.
By standardizing dhan habka maareynta tafaariiqda, software wuxuu sameeyaa si fiican loo isticmaalo shaqaalahaaga 'waqti iyo tamar xad dhaaf ah u qaado bedbedelka iyo faa'iido xadad.